ဆာရီက ဂျုဗင်တပ်စ်အသင်းရဲ့ နည်းပြတစ်ယောက်အဖြစ် ဆက်လက်ရှိနေသင့်ရဲ့လား? – MySport Myanmar
ဆာရီက ဂျုဗင်တပ်စ်အသင်းရဲ့ နည်းပြတစ်ယောက်အဖြစ် ဆက်လက်ရှိနေသင့်ရဲ့လား?
စပါးနည်းပြဟောင်း ပိုချက်တီနိုနဲ့ ကောလဟာလသတင်းလေးတွေ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးနောက် ဂျုဗင်တပ်စ်အသင်းရဲ့စီအီးအိုဖြစ်သူက အဲ့ဒီသတင်းတွေကို ငြင်းဆန်ခဲ့ပြီး အသင်းမှာ လက်ရှိနည်းပြဆာရီပဲ ဆက်လက်ကိုင်တွယ်နေဦးမှာပါလို့ ထုတ်ပြန်ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ အဲ့လိုပြောဆိုလို့အပြီး ဒီတစ်ပတ်ကစားခဲ့တဲ့ စီးရီးအေပွဲစဉ်(၃၅)မှာ ငယ်နိုင်လို့ဖြစ်နေတဲ့ အူဒီးနီစ်လို အမှတ်ပေးဇယားအောက်နားက အသင်းကို တစ်ဂိုးသွင်းယူခဲ့ပြီးမှ စိတ်ပျက်လောက်စရာခြေစွမ်းတွေနဲ့ အရေးနိမ့်သွားခဲ့ရတယ်။ ဒီရှံးပွဲအတွက် ဘယ်သူမှ တာဝန်အရှိဆုံး ဖြစ်နေမလဲ။ နည်းပြဆာရီလား။ ဂျုဗင်တပ်စ်အသင်းသားတွေလား။
ကျွန်တော်ကတော့ ဆာရီရဲ့အပြစ်တွေလိုပဲ ထင်မိပါတယ်။ ဘနူချီလို ဝါရင့်နောက်ခံလူတစ်ယောက်ကို ထည့်သွင်းကစားခြင်းမရှိပဲ ရူဂါနီကို အသုံးပြုလာခဲ့တာနဲ့ နည်းဗျူဟာအပြောင်းအလဲတွေကို မစီစဉ်နိုင်တာတွေကြောင့် ဆာရီရဲ့ဂျုဗင်တပ်စ်အသင်းဟာ စီးရီးအေချန်ပီယံအဖြစ် သတ်မှတ်ခံရမယ့်နေ့မှာ အရှက်တကွဲအကျိုးနည်း ဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ ဆာရီကို ဒီတစ်ပွဲတည်းနဲ့ ဝေဖန်ပြစ်တင်မယ်ဆိုရင် မတရားရာကျနေနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ဆာရီကို ဒီတစ်ရာသီစာလုံးအတွက် ဝေဖန်ချင်တာပါ။ ကျွန်တော်အမြင်အရဆိုရင်တော့ ဆာရီဟာ ဂျုဗင်တပ်စ်လို ထိပ်တန်းအသင်းတစ်သင်းရဲ့နည်းပြတစ်ယောက် မဖြစ်သင့်တဲ့လူလို့ပဲ မြင်မိတယ်။
အသက်(၆၁)နှစ်အရွှယ် အီတလီသားကြီးက ဂျုဗင်တပ်စ်ကို စီးရီးအေချန်ပီယံဖြစ်လာအောင် လုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့ စောဒက်တတ်စရာ ရှိပါတယ်။ သူကိုင်တွယ်နေတဲ့အသင်းကလည်း စီးရီးအေချန်ပီယံဆုကို (၈)နှစ်ဆက် ရယူခဲ့တဲ့အသင်းလေ။ နောက်ပြီးတော့ အသင်းက Form မကောင်းနေရင်တောင် အနောက်ကလိုက်လာတဲ့ လာဇီယို အင်တာမီလန်တို့က လိုက်ရင်းပြေးရင်း နောက်ကောက်ကျရင်းတွေဖြစ်နေတော့ ချန်ပီယံထပ်ဖြစ်ဖို့က မခဲယဉ်းရတာလို့မြင်တယ်။ ဂျုဗင်တပ်စ်ပရိသတ် အယောက်တစ်ရာရှိရင် အယောက်(၉၀)လောက်က ဂျုဗင်တပ်စ်ကို ရော်နယ်ဒိုရှိနေလို့ အားပေးရတာလို့တောင် ပြောဆိုနေကြတဲ့အထိပဲ။ အနိုင်ရခဲ့တဲ့ ပွဲတွေတိုင်းမှာ ဘာမှစိတ်ကျေနပ်လောက်စရာမရှိတဲ့ ကစားပုံတွေ နည်းဗျူဟာတွေကိုပဲ ထပ်တလဲလဲ မြင်တွေ့ခဲ့ရသလို ဒီနောက်ပိုင်း ပွဲတွေမှာဆိုရင်လည်း သွင်းဂိုးတွေရပြီးမှ ပေးဂိုးတွေ ပြန်လည်ခွင့်ပြုရင်း အမှတ်တွေက ဆုံးရှံးခဲ့ရတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမှာ လာဇီယိုသာ ခြေမကျခဲ့ဘူးဆိုရင် ဒါမှမဟုတ် အတ္တလန်တာသာ ရာသီအစကတည်းက ရလဒ်ကောင်းနေမယ်ဆိုရင် အဆင့်(၁)နေရာကနေ ဂျုဗင်တပ်စ်တို့ အချိန်မရွေး ဆင်းပေးသွားရနိုင်တယ်။ အခုကတော့ ရှံးနေတာတောင် ချန်ပီယံလမ်းကြောင်းကို မထိခိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင် ဆာရီအတွက် နည်းပြဘဝ ပထမဆုံး အမှတ်ပေးဖလားကြီးကိုတော့ ကိုင်မြှောက်ရဦးမှာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဆာရီရေ ဒီလောက်နဲ့ပဲ ကျေနပ်လိုက်သင့်ပါပြီ။ ပိုချက်ကိုခန့်ဖို့ အဆင်မပြေနိုင်ဘူးဆိုရင်လည်း အယ်လီဂရီပြန်လာမယ်ဆိုရင်တောင် အခုဂျုဗင်တပ်စ်ကစားပုံလောက် ရုပ်မပေါက်နိုင်ဘူးလို့ပဲ ထင်မိပါတယ်။
MySport Myanmar2020-07-24T13:35:21+06:30July 24th, 2020|Football, Serie A|